Dagaalyahan Alshabaab ka tirsanaan Jiray oo sheegtay Afduubka Haweeney Faransiis ah – SBC
Dagaalyahan Alshabaab ka tirsanaan Jiray oo sheegtay Afduubka Haweeney Faransiis ah
Posted by Webmaster on October 3, 2011 Comments
Wakaalada Wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Mid ka mid ahaan jiray Ciidamadii Alshabaab ee Gobolada Jubooyinka uu sheegtay Masuuliyada Afduubka loo geystay Haweeyenay Faransiis ah oo laga soo afduubtay Deegaanka Luma ee loo dalxiiska Tago.
“Haweneyda curyaanta ah ee faransiiska ah halkan ayay joogtaa wayna fiican tahay,waxaanu ku ilaalineynaa iyada inta u dhaxeysa Jubada hoose iyo jubada dhexe, mana nihin alshabaab waxaanu raadineynaa lacag madax furasho ah,” sidaa waxaa Reuters u sheegay nin Alshabaab ka tirsanaan jiray oo iminka sheegay inuu ka mid yahay kooxda qafaalatay Haweeneyda Faransiiska.
Ninkani sheegay inuu ka mid yahay kooxda haweeneyda qafaashay ayaa waxaa uu sidoo kale sheegay inaan weli la isku afgaran cadadka lacageed ee ay dalbanayaa isaga oo sidoo kalena xusay in koox iyaga ka mid ah ay ku talineyso in deegaan kale loo wareejiyo.
Wakaalada wararka ee Reuters oo wareysigan si gaar ah u heshay way ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso ninkan ay xigteen.
Dhinaca kale ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Xarakada Alshabaab oo ku aadan in nin kani uu ka tirsan yahay iyaga iyo in deegaankooda lala aaday haweeneyda curyaanta ah ee ay qafaasheen kooxaha hubeysan ee Soomaalida.
Dowlada Kenya oo uu dalkeeda ka dhacay waqtiyo isxiga Afduubyo isdaba jog ah ayaa waxaa aanay weli soo saarin war rasmi ah oo ay kaga jawaabeyso amuurtan marka laga reebo inay ku raad joogto afduubyada dhacay dadkii geysty.
Maxamad Deeq Cabdalla
Kkkkkkkk warkaa waxaa alifay dadka mujaahidiinta alshabaab ku lid ah waxaan leeyahay alshabaab meel walba oo caalamka ah waa joogtaa damacoodu masiinayo naag curyaan ah inay afduubtaan waa bahdil iyo canbaarayn alshabaab hadii kitaabkooda kudhaqankiisa loo ogolaado iyo ciidooda dan kama leh gaala kale balse waxa ka go.an muslimiin kasta oo kudagaalaysa kitaabka inay ugurmadaan 70kenya iyo amxaara ah oo raga bay dharaar afduuban karaan oo raga